Fantaro i... Rakotomavo Gilbert
Sorapiainan'i Gilbert Rakotomavo, fandalinan'i Tsikimilamina Rakotomavo
Azo heverina araka izany fa ny famoronana tononkalo toy ny ataon-dRakotomavo Gilbert no fomba fiarovana ny teny malagasy tsy ho levona. Izany indrindra no nahatonga ny mpanoratra hiventy an-tononkalo ny fanomezan-kasina ny teny malagasy manao hoe:
“N’aiza n’aiza ianao tazaniko
Anisan’ny nanamarika ny tontolon’ny Pôeta Rakotomavo Gilbert tokoa ny fanoratana tononkalo. Rakotomavo Gilbert na R.G no sonia apetrany hatrany eo ambanin’ny tononkalony. Taorian’ny nivoahan’ilay tononkalony mitondra ny lohateny hoe ”NOELY” tao amin’ny gazety Mpamangy ny desambra 1966 dia tafiditra ho mpikambana tao amin’ny A.J.E.M. (Association des Journalistes et Ecrivains malgaches) izy.
“Raha noraisiko ny peniko
Safatsiroa tak 10
Mitovy endrika amin’ny ”pôezia Rose”, natolotr’i Jupiter na Justin Rainizanabololona izay voalaza fa mpanjakan’ny pôezia malagasy izany endrika izany. Nambarany tamin’ny alalan’ny ohatra nomeny fa ny andalana roa aloha no miady ary ny roa aoriana kosa no miady (Rabemolaly sy ny namany, 1975, tak 55)
Filohan’ny zanaka am-pielezana Ambohimandroso Ambohimanga
Filohan’ny zanaka am-pielezana Ambolo
Mpanolo-tsaina tao amin’ny firaisan’ny 70 trano Antananarivo Renivohitra izy ary Filohan’ny lohavolana 70 trano Antananarivo avaratra, izay niray tamin’ny synodam-paritanin’Ambatonakanga